Ukuthengiswa kwephrinta ye-Bag yokuthenga China Manufacturer
Incazelo:Ilogo Printed Printing Machine,Iphrinta ye-Flat Bag Yokuthenga,Iqondisa ku-Bag yephrinta
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-Digital > Iphrinti yeThetile > Ukuthengiswa kwephrinta ye-Bag yokuthenga
I-Model No.: RF-A3 T0323
Singumkhiqizi ikakhulukazi ukukhiqiza i-printer flatbed iminyaka eminingi, sinabaningi abaningi abaneminyaka engaphezu kwengu-10 eyisipiliyoni esisebenzayo esisebenzayo. Ukuze i- Logo Printed Printing Machine , i-printer ukuphrinta isikhwama, isikhwama sokuthenga. Futhi ungaphrinta ihembe, izicathulo, amabhulukwe, i-jeans, indwangu nokunye. Iphrinta ye- Flat Bag Yokuthenga ithola imibala engu-6 CMYKWW, isinqumo esikhulu sokunyathelisa singaba ngu-5760 * 2880dpi. Uma ufuna ukuthola isisindo esincane, ukuphatha kalula, intengo enhle kanye nekhwalithi elihle, sicela uxhumane nami, singakwazi ukuhlangabezana nesicelo sakho. Hhayi nje u-DIY izikhwama zakho, kodwa nabanye. Vele usebenzise ingqondo yakho ehlakaniphile ukwakha ibhizinisi elisha. Ukuthengiswa kwephrinta ye-Bag yokuthenga
Iqondisa ku-Bag yephrinta
Ilogo Printed Printing Machine Iphrinta ye-Flat Bag Yokuthenga Iqondisa ku-Bag yephrinta Best Machine Printing Machine Ama-Photo Photo Printing Machines Black T-Shirt Ilogo Printing Machine I-Macaron Printer Machine I-Foam Coffee Printer Machine